♪ Rocker ကြီးလေးဖြူရဲ့သီချင်းပေါင်း 250 ကျော် ♫ ~ ဘလော့ခရီးသည်
ရော့ခ် အဆိုတော်ကြီး လေးဖြူထွက်ခဲ့သမျှသီချင်းများအားလုံးကို တစ်ပုဒ်ချင်းစီ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တစ်ပုဒ်ချင်းစီတင်ပေးထားတဲ့အတွက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာသီချင်းများကိုရွေးချယ်ပြီးဒေါင်း ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Special thanks to Ko Axle Rose & Ko Naing
လေးဖြူ သီချင်းများစုစည်းမှု -------------------------------
(၁) - ကန္တာရလမင်း
၀၃။ ကမ္ဘာကြီးက လုံးပြီး ၀ိုင်းနေတော့
၁၀။ ရှေ့က ကောင်းကင်
၁၃။ နောက်ထပ် တို့မဝေးဘူး
(၂) - ပင်လယ်အော်သံ
၁၄။ ပါးပြင်ပေါ်က ရက်စွဲများ
၂၀။ သေခြင်းရဲ့ တံခါးများ
၂၂။ စီးဆင်းသွားတဲ့ စမ်းချောင်းလေး
၂၄။ သင်၏နားကို ငှားပါ
(၃) - ကန္တာရပင်လယ်လမင်းအော်သံ (Live 94')
၂၇။ သေခြင်းရဲ့ တံခါးများ
၂၈။ လှမ်း.... အဝေး
၃၄။ ဒီရေ ဒီလှေ
၃၆။ ရှေ့က ကောင်းကင်
(၄) - ဂီတ မဉ္ဖူရီ -----------------
(၅) - ပါဝါ (၅၄)
(၆) - ကမ္ဘာသစ်တေး
၅၅။ တစ္ဆေတစ်ကောင်ရဲ့ ည
၆၁။ မျက်ရည် ယန္တရား
(၇) - ကျိန်စာ
(၉) - ရာစုသစ် (လေးဖြူ + အငဲ + မျိုးကြီး)
၈၄ ရာစုသစ် (L A M)
၈၅ မျက်ရည်ပြဇာတ် (L)
- တံလျှပ်များ (M)
၈၆ အို့ .. ဒီဇင်ဘာ (L A M)
၈၇ ငါတို့ခရီး (L A M)
- လတစင်းလိုချင်တယ် (A)
၈၈ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တော့ (L M)
- နေမ၀င်အချစ် (M)
- ချစ်သူ့ဂီတည (A)
၈၉ အစိမ်းသက်သက် အစိမ်း (L)
၉၀ ဘယ်မှာနားခိုမယ် (L.A.M)
၉၁ - အလွမ်းနဲ့ရေးတဲ့သီချင်း (L M))
(၁၂) - “IRON CROSS - UNPLUGGED”
- ထပ်မဝေးဘူး - အငဲ
၁၁၅။ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တော့ - လေးဖြူ+မျိုးကြီး
- အချစ်ရူး - ထွဏ်းထွဏ်း
- တယ်လီဖုန်း - ဝိုင်ဝိုင်း
- ကြယ်ကြွေသွားသည့်တိုင် - မျိုးကြီး
- ပေးဆပ်မယ့်အချစ် - ဇော်ပိုင်
၁၁၆။ ရောဂါ - VA
- မိုးသည်းထဲမှာ - မျိုးကြီး
- ကိုယ်ရေးရာဇဝင် - အငဲ
- လွမ်းတဲ့စိတ် - မျိုးကြီး
၁၁၇။ အသုံးမကျတဲ့နှင်းဆီ - လေးဖြူ
- မရှိတော့ဘူး - ထွဏ်းထွဏ်း
- ပြန်ဆုံမယ့်ညနေ - ဝိုင်ဝိုင်း
၁၁၈။ နေရောက်အောက်ကအသက်ရှုသံ - VA
(၁၃) - IRON CROSS – ACOUSTIC LIVE 15TH ANNIVERSARY
၁၁၉။ ဒီရေဒီလှေ - လေးဖြူ
- ဖြတ် - R ဇာနည်
- ရင်ခုန်ရလွန်းသူ - ဇော်ပိုင်
- လမိုက်ည - မျိုးကြီး
- အိမ်လွမ်းသူ - ၀ိုင်ဝိုင်း
- ကမ်းမရှိတဲ့အချစ် - အငဲ
၁၂၀။ နူးညံ့တဲ့အမိန့်တော် - လေးဖြူ+အငဲ
- ယဉ်ယဉ်လေးရူး - R ဇာနည်
၁၂၁။ ဒီဇင်ဘာ - လေးဖြူ+အငဲ+မျိုးကြီး
- အဆိပ်ခွက် - မျိုးကြီး
- ပန်းနုချစ်နှုတ်ခမ်း - ဇော်ပိုင်
- စည်း - ၀ိုင်ဝိုင်း
၁၂၂။ အသစ်ကမ္ဘာသို့ - VA
၁၂၃။ အလင်းရောင် - လေးဖြူ
(၁၄) - မံမီများ
၁၃၂။ အတောင်ပံတစ်စုံရဲ့ စွမ်းအား
(၁၅) - LMN - လေးဖြူ + အငဲ + မျိုးကြီး
- မီးများ – မျိုးကြီး
၁၃၆။ လမ်း – လေးဖြူ
- နတ်မိမယ်မိန်းမလှလေး – အငဲ
- တစ္ဆေ – မျိုးကြီး
၁၃၇။ အပယ်ခံ - လေးဖြူ
- နယ်မြေသစ်များစွာ – အငဲ
- ရှတနေ့ရက်များ – မျိူးကြီး
- အလင်းနှစ်များ – အငဲ
၁၃၈။ အ၀ါရောင်ကိုက်ခဲမှု – လေးဖြူ
- ပြန်မရဘူး – မျိုးကြီး
- အမှောင်ထဲက သူစိမ်းများအကြောင်း – အငဲ
၁၃၉။ မာယာ – လေးဖြူ
(၁၆) - “ခဏလေးများ”
၁၄၉။ shout shout
(၁၇) - BOB ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်
ဝ၅။ ကစဉ့်ကလျား သီအိုရီ
၁၆၃။ စာမျက်နှာ ၁၅
(၁၈) - Dennis Martin နာရီ ကြော်ငြာ သီချင်း
၁၆၅။သက်ရှိမြစ် (ရေး - မြင့်မိုးအောင်)
(၁၉) - VA - J-Asean Pops official Songs
- Hargailah Dunia Kita
-. Sahabat Dunia
- This Love For The World
- Dunia Milik Kita
၁၆၆ -. Treasure The World (Lay Phyu)
- Awit Ng Ligaya
- Treasure The World
- The Gioi Tuoi Dep
(၂၀) - လေးဖြူ - Duet
၁၆၇ - လမ်းဟောင်းလေးသို့အလွမ်း - ဒီဒီး
၁၆၈ - အရည်ပျော်ခြင်း - ချောစုခင်
၁၆၈ - ရွှေရောင်အရှုံး - မီးမီးခဲ
၁၆၉ - အရည်ပျော်ခြင်း - မဒီ
(၂၁) - Single
၁၇၀ - ဒိုင်ယာရီ (Single) 2013
၁၇၁ - စိတ်ပူတယ် (Single) 2013
(၂၂) - ဒိုင်ယာရီ
၁၇၂ - ငြိမ်းချမ်းရေးနိဒါန်း
၁၇၃ - ကမ္ဘာမြေအောက်
၁၇၃ - ဒိုင်ယာရီ
၁၇၄ - ရုတ်သိမ်းပေး
၁၇၅ - ကြိုနှင့်တော့
၁၇၆ - စိတ်နဲ့ခန္တာ
၁၇၇ - စိတ်ပူတယ်
၁၇၈ - ကြိုး
၁၈၀ - ရေမျှောကမ်းတင်
၁၈၁ - အိပ်မက်
(၂၃) - IRON CROSS LIVE 20th ANNIVERSARY
၁၈၂ - ကမ္ဘာကြီးကလုံးပြီးဝိုင်းနေတော့ - လေးဖြူ
၁၈၃ - အမဲလိုက်အက - လေးဖြူ
၁၈၄ - မျှော်လင့်ခြင်းလေး - လေးဖြူ
၁၈၅ - ငါ့ရဲ့လမင်း - လေးဖြူ
၁၈၆ - စာမျက်နှာ၁၅ - လေးဖြူ
၁၈၉ - မလုပ်နဲ့ - လေးဖြူ
- အချစ်ဦးပုံပြင် - အငဲ
- မယုံနိုင်ဘူး - အငဲ
- ငါသေနိုင်တယ် - အငဲ
- ပက်သတ်ခဲ့သမျှ - အငဲ
- အခမ်းနားဆုံး - မျိုးကြီး
- မျှော်လင့်ချက်မဲ့ - မျိုးကြီး
- ပြန်ရဦးမလား - မျိုးကြီး
- ရောခ့်သီချင်းတစ်ပုဒ် - မျိုးကြီး
- အေးဆေးပါ - ၀ိုင်ဝိုင်း
- ထာဝရအဆုံးထိ - ၀ိုင်ဝိုင်း
- စိတ်ထွက်ပေါက် - ၀ိုင်ဝိုင်း
- တမ်းတ - ၀ိုင်ဝိုင်း
(၂၄) - Collection 1
၁၉၀ - ခြောက်ကြိုးကဝေ
၁၉၂ - အခမဲ့
၁၉၃ - ဖင်ဆီဒိုင်း
၁၉၄ - ရာဇ၀င်ရိုင်းတယ်
၁၉၅ - အတိတ်ရဲ့အရိပ်
၁၉၆ - နောက်ဆုံးအချစ် (ဗစ်တာခင်ညို)
၁၉၇ - နှလုံးသွေးများရပ်တန့်သွားပစေ (ဂျက်မြသောင်း)
၁၉၈ - အလှဆင်လိုက်ပါ သည်ကမ္ဘာ
၁၉၉ - ကမ္ဘာသစ်ဆီသို့
၂၀၀ - တန်ဖိုး
၂၀၁ - ငါ့အသည်းကို မြန်မြန်ခွဲပါ
၂၀၂ - တခါကဧရာဝတီညများ
၂၀၃ - ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီး (Live in Japan)
၂၀၄ - အရည်ပျော်ခြင်း
၂၀၅ - အမှောင်ထဲကအလင်း
၂၀၆ - နောက်ဆုံးသဘောထား
၂၀၇ - နိုင်ငံတော်တည်လုနီးပြီ
(၂၅) - Collection (2)
၂၀၈ - မဉ္စူရီ (Singapore Live)
၂၀၉ - သဇင်ကြွေတဲ့ဆောင်း
၂၁၀ - သတိမမူဂူမမြင်
၂၁၁ - အမဲလိုက်အက (REMIX)
၂၁၂ - အလကားပဲ (Remix)
၂၁၃ - အသည်းမညည်းနဲ့
(၃) - ကန္တာရပင်လယ်လမင်းအော်သံ
(၄) - ဂီတ မဉ္ဖူရီ https://my.pcloud.com/publink/show…
(၁၆) - ခဏလေးများ
(၂၄) - Collection (1)
၇၀ ၈၀ ၉၀ Group မှ စာသားအတိုင်း
ဤသီချင်းများကို ဂီတမြတ်နိုးသူ အချင်းချင်း
အခမဲ့ ခံစားမှုမျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊
သီချင်းများကိုနှစ်သက်လျှင် မူရင်းများကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။
အယ်လ်ဘမ်လိုက်ဒေါင်းချင်သူတွေ အောက်ကလင့်ခ်မှ သွားပါ